လက်ကား PLA Sheet Extrusion Line ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူ | ချန်ပီယံ
CHAMPION MACHINERY အမှတ်တံဆိပ် PLA စာရွက် extrusion line ကို အထူး R&D နှင့် PLA စာရွက်၏ မြင့်မားသော ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် ထုတ်ကုန်မာကျောမှုသေချာစေရန် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသည်။
ယနေ့ထုတ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းအတွက် အမှန်တကယ်အလားအလာရှိပြီး အမြတ်အစွန်းရှိသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူး extruder ဒီဇိုင်းသည် စက်ပစ္စည်းအား အပူချိန်မြင့်မားသော PLA နှင့် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နိမ့်သော PLA တို့၏ မတူညီသော ကုန်ကြမ်းနှစ်ခုကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်စေပါသည်။
PLA sheet extrusion machine သည် PET sheet ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။PET စာရွက် extrusion လိုင်း.
ပျက်စီးနိုင်သော PLA၊ PET
PLA Extruder-extrusion စနစ်
ဝက်အူ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဝက်အူဒြပ်စင်များ၏ပေါင်းစပ်မှုအားလုံး၊ CHAMPION စက်ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မြင့်မားသောမာကျောမှုနှင့်အတူမြင့်မားသောဝတ်ဆင်ခုခံ။
၎င်းသည် PLA virgin material နှင့် virgin material နှင့် recycled material တို့ကို ရောစပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။ PLA အတွက် အထူးအပြိုင် အမွှာဝက်အူသည် extruder တွင် မတူညီသော ပစ္စည်းများ၏ ကွဲလွဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။
အခမဲ့ crystallizer နှင့် dehumidifier ယူနစ်၊ ပစ္စည်းကို ကြိုတင်အပူမပေးပါ။
လေဝင်လေထွက်စနစ် = သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားခြင်း + ဖုန်စုပ်စုပ်ခြင်း
ဤဖုန်စုပ်စနစ်သည် extruder အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ၏ အစိုဓာတ်ကို ကုန်ဆုံးစေရုံသာမက extruder အတွင်းရှိ အညစ်အကြေးများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ စာရွက်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အစက်အပြောက်များ မရှိပါ။
extruder မှ T-Die အထိ၊ အပြည့်အဝဖိအားစောင့်ကြည့်။
အရည်ပျော်ပန့်မတိုင်မှီနှင့် အရည်ပျော်ပန့်အပြီးတွင် ဖိအားအာရုံခံကိရိယာ တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအပိတ်အဝိုင်းထိန်းချုပ်မှုသည် extruder အား အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်စေပါသည်။
အကွေ့အကောက်စနစ် နှစ်မျိုး- manual work winder ၊ အလိုအလျောက် winder ။
SIEMENS servo မော်တာထိန်းချုပ်မှုစနစ် တပ်ဆင်ထားသော အော်တိုလေထိုးတံ။ ၎င်းသည် ပိုမိုတိကျပြီး အကွေ့အကောက်များကို ပိုမိုအဆင်ပြေ၊ ရိုးရှင်းပြီး ဘေးကင်းစေသည်။
အမှီအခိုကင်းသော သုတေသနဖြင့် တပ်ဆင်ပြီး အလိုအလျောက် လေထိုးစက်ကို တီထွင်ပါ၊ PLA စာရွက် extruder စက်၏ လိုင်းအမြန်နှုန်းသည် မြန်ဆန်နိုင်သည်။
PLA စာရွက်ထုတ်ကုန်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပုံး၊ သစ်သီးပုံးများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ထုပ်ပိုးမှုများစသည်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။
SIEMENS S7-1500 ထိန်းချုပ်မှုစနစ်။
SIEMENS servo ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အင်ဗာတာ ထိန်းချုပ်မှု။
Key to acceleration ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် စာရွက်လိုင်း၏အရှိန်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
မျက်နှာပြင် လည်ပတ်မှု အကန့်တစ်ခုသာ၊ လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်။
PLA (ပိုလီလက်တစ်အက်ဆစ်) သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သော ဇီဝရုပ်ကြွင်းပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အပင်အရင်းအမြစ်များ (ဥပမာ ပြောင်း၊ ပီလောပီနံစသဖြင့်) မှ ထုတ်ယူသော ကစီဓာတ်ကုန်ကြမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်သည် ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင်ပါသည်။
2. PLA စာရွက်ထုတ်ယူခြင်းစက်၏ ကိုးကားချက်ကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
ကျေးဇူးပြု၍ CHAMPION အရောင်းမန်နေဂျာကို ဆက်သွယ်ပြီး အကျယ်၊ အထူ၊ စွမ်းရည်နှင့် အခြား အထူးလိုအပ်ချက်များကဲ့သို့သော သင့်စာရွက်ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များကို ပြောပြပါ။
3. ပေးပို့ချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။
4 လခန့်၊ အသေးစိတ်အချိန်ကို ကျေးဇူးပြု၍ CHAMPION ပုဂ္ဂိုလ်ထံမေးပါ။
ယခင်- PP/PS Sheet Extrusion Line
နောက်တစ်ခု: စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ဗန်းအတွက် PET စာရွက် ထုတ်ယူခြင်းလိုင်း